Macalin Arsene Wenger oo sheegay in uu casuumaad ka helay madaxwaynaha Liberia Ee George Weah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Macalin Arsene Wenger oo sheegay in uu casuumaad ka helay madaxwaynaha Liberia Ee George Weah
Published on January 6, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(06-01-2018) Tababare Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in lagu casuumay caleema-saarka madaxweyne George Weah kaas oo noqday madaxweynaha dalka Liberia, wuxuuna xidigiisii hore ku sheegay noloshiias mid u qalanta in sheeko filim laga qoro.
George Weah oo kasoo hoos ciyaaray Arsene Wenger intii u dhaxeysay 1988 ilaa 1992 xilli uu macalinka reer france maamulaha ka ahaa As Monaco, Weah waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha xiga ee Liberia isago helay codadka ugu badan ee doorashadii la qabtay bishii lasoo dhaafay 61.5%.
Caleema saarkiisa wuxuu dhacayaa 22-ka January, waxey kusoo aaday xilli Gunners ay 20-ka January la ciyaareyso Crystal Palace kulan ka tirsan horyaalka Premier League, sidoo kalana ay Chelsea la ciyaareyso 24-ka January lugta labaad ee Semi finalka Carabao Cup.
Xiddigii hore ee AC Milan ayaa dhawaan ku guuleystay cod bixinta Madaxtinimo ee dalkiisa Liberia kaddib markii uu helay 61.5%, Munaasabada caleemo saarkiisa ayaa la qaban doonaa 22-ka bishan Janaayo.
Caleemo saarka Weah ayaa dhici doona inta u dhaxeysa marka ay Arsenal Premier League ku wajaheyso Crystal Palace 20-ka Janaayo iyo marka ay Semi Final ka Carabao Cup la dheelayso Chelsea 24-ka Janaayo.
Wenger oo ka hadlaya Weah ayaa yiri:
“Marka aad eegto noloshiisa waa sida Film oo kale. Ma ahan mid la rumeysan karo, waa Film Cajiib ah.
“Waxaan isaga ku arkay Monaco isagoo u muuqda mid lunsan, cidna ma uusan aqoon, looma qiimeyn jirin sida ciyaaryahan.
“Laacibka ugu fiican adduunka ayuu noqday 1995 iminkana waa madaxwaynaha dalkiisa, waa wax aan la rumeysan karin.